विद्यार्थीका लागी उपयोगी ९ वेबसाइट | ''Knowledge Never Ends''
इन्टरनेट, सूचनाको द्रूत राजमार्ग मात्र होइन हाम्रो ज्ञानको महत्वपूर्ण माध्यम हो यो। संसार यसले समेटेको छ अनि विश्व नै यसमा समेटिएको छ। अहिले त हरेक कुरा इन्टरनेटमा छ, कोर्सका कुरा अनि होमवर्कका कुरा सबै खोजे पाइहालिन्छ। इन्टरनेटका बारेमा धेरैले भन्ने कुरा हुन् यी। तर इन्टरनेट जोडेका कम्प्युटर चलाउन बसेका धेरैलाई पर्ने समस्या चाहिँ यो हो कि ती ज्ञान र सूचनामा आफूलाइ चाहिने कुरा पाउन कहाँबाट सुरु गर्ने। अनि ति सामग्रीको विश्वसनियता के होला सबैको मनमा उठ्ने जिज्ञासा हो यो। सजिलो भएको ब्लग निर्माणले धेरै सामग्रीको विश्वसनियतामा धक्का पुर्‍याएको छ अहिले। त्यसले अध्ययनका लागि खाली गुगल गर्नु वा गुगलीनु मात्र पर्याप्त छैन। अधिकांशले आफूले खोजेको चाहेको विषयलाई दुई वा तीन शब्दमा गुगलमा खोजी गर्छन् त्यसले व्यापक नतिजा देखाइरहेको हुन्छ जुन प्रयोग भएका शब्दको मेल खाएका पेजहरुको लामो सूचि मात्र हुन्छ। आफूलो चाहेको विषय भन्दा निक्कै पर रहेको हुन्छ। क्याम्पसे तथा विश्वविद्यालयको जिवनमा इन्टरनेट अध्ययनका क्रममा समय र अर्थ दुवैको बचतको माध्यम हो। जागिर गर्दै अध्ययन गरिरहेका हरुको लागि पुस्तक किन्ने खर्च देखी कम समयमा अध्ययन सक्नुपर्ने दबाबलाई सामना गर्ने हतियार पनि हो इन्टरनेट। त्यसका लागि इन्टरनेटमा उपलब्ध केही वेबसाइटलाई साथी बनाउन सकिन्छ। त्यो कुनै प्रोफेसरको ब्लग पनि हुनसक्छ अनि कुनै रेफरेन्स लाइब्रेरी पनि। इन्टरनेटमा उपलब्ध रहेका असंख्य पेजहरु मध्ये तलका केही नेपाली विद्यार्थीका लागि उपयोगी पेज हुन्।
१. रेफडेस्क डट कम refdesk.com
फ्याक्ट चेकर फर द इन्टरनेट, नारा रहेको यो वेबसाइटमा नारामा जस्तै सत्य तथ्यमा आधारित सामग्री रहेका छन्। जसले इन्टरनेटमा उपलब्ध ज्ञान र सूचनाहरुबाट तथ्यपर्ूण्ा सामग्री पाउनमा मद्दत गर्छ। यसमा गुगल गरेर पाइने सामग्री भन्दा बिलकुलै फरक सामग्री छन्। विश्वभरका समाचार, तिनको संग्रह, विश्वप्रसिद्ध व्यक्तित्व तिनका कामहरु, भूगोल, प्रकृति, अर्थव्यवस्था, समाज, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ अनेकन विषयका लेख यसमा उपलब्ध छन्। साथै यसले गुगल, बिंग, याहु, विकीपीडिया लगायतका प्रमुख र्सचइन्जिनका अप्सन पनि यसले होमपेजमा नै दिएको छ। युट्युबका साथ धेरै डिक्सनरी र विश्वकोषमा खोजी गर्ने अप्सन पनि यसमा उपलब्ध छ। यसको विषेशता भनेको सूचना र ज्ञानका लागि आवश्यक इन्टरनेटका पेजहरु यसले एकै ठाउँमा उपलब्ध गराएको छ।
२. फ्याक्टमोनस्टर डट कम factmonster.com
एउटा विद्यार्थीले यो वेबसाइटमा अध्ययनका लागि धेरै सामग्री पाउन सक्छ। यसमा रेफरेन्स डेस्कका रुपमा होमवर्क सेन्टर, एटलास, डिक्सनरी, इन्साइक्लोपेडिया, क्विज, प्रसिद्ध व्यक्तिका जिवनी रहेका छन्। जसले होमवर्क गर्न सघाउनले देखी विश्वभर भएका भौतिक, अध्यात्मिक उन्नती र विकासको पूर्ण विवरण यसबाट पाउन सकिन्छ। विश्व, विज्ञान, खेल साथै गणितका तथ्यपूर्ण सामग्री यसको विशेषता हो। यसको टाइमलाइन सेक्सनमा इतिहासका भर्चुअल यात्राको अवसर छ यो वेबसाइट सिकाउने मात्र होइन सम्झाउने गुण सहित वेबमा उपलब्ध छ।
३. उल्फ्रेमअल्फा डट कम wolframalpha.com
विद्यार्थी एवं अनुसन्धाताका लागि महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको छ यो वेबसाइट। यसको विषेशता भनेको यसले खोजिलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। वेबसाइट आवश्यकता अनुसारको विषयका सूचनाहरु दिन सक्षम छ। त्यसैले सञ्चालकहरु यसलाई कम्प्युटेसनल नलेज इन्जिनियरिङ भनेर भन्दछन्। यो एउटा सामान्य र्सच इन्जिन मात्र होइन। एउटा बुद्धिमान खोज जसले सूचना खोजने मात्र होइन अध्ययनलाई एउटा नतिजा देखाउने रिजल्ट पनि दिन्छ। यसमा दुई शब्द टाइप गरेर खोज गर्दा यसले सामान्य र्सच इन्जिनले जस्तो ती दुई शब्द भएका पेजहरु मात्र खोजेर देखाउँदैन। ती दुई बीचको तुलनात्मक अध्ययन गरेर रिजल्ट देखाउँछ।
४. इन्फोप्लिज डट कम infoplease.com
इन्फोप्लिज, एउटा स्रोत संग्रहको वेबसाइट हो। जसमा इतिहास देखी वर्तमान समेटिएको छ। यसमा उपलब्ध तथ्यहरुबाट अध्ययनलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउन सजिलो बनाउँछ। यसमा विश्वभरका अखबार पढ्न सकिन्छ। इतिहास, खेलकुद, जिवनी कला मनोरञ्जन, व्यापार वाणिज्य, स्वास्थ्य र विज्ञानका लेख र सम्बन्धित विषयका राम्रा वेबसाइटको लिंक यसमा पाउन सकिन्छ।
५. वाइजगिकडटकम wisegeek.com
वाइजगिकडटकम लेखको भण्डार हो। अनुसन्धान लेखको संग्रह रहेको यो वेबसाइटमा कलेज, विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने देखी दर्शनशास्त्र समेट्ने सबै विषयमा राम्रा, स्तरिय लेख उपलब्ध छ। यसले आफूसँग विज्ञान र इन्जिनियरिड सँग जोडिएका धेरै विषयमा साडे चार हजार, युवा शिक्षा तथा तालिममा साडे पन्ध्र हजार, महान व्यत्तित्वका विषयमा एकहजार तीनसय, अर्थ बारे सात हजार, जनावर र पर्यावरण बारे करिब पाँच हजार, प्रविधि, ग्याजे बारे चार हजार लेख रहेको दाबी गर्छ। यति धेरै लेख र विषय उपलब्ध हुनु यसको विशेषता हो।
६. पुस्तकालय डट ओआरजी pustakalaya.org
नेपाली भाषका वेबसाइट मध्ये अध्ययनका लागि उपयुक्त वेबसाइट हो यो। साझा शिक्षा इ पाटीको इ पुस्तकालय नेपाली कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रपत्रिकाको संगालो भएको निशुल्क वेबसाइट हो। यसमा नेपाली पत्रपत्रिकाहरु विषय सामग्री, सन्दर्भ सामग्री साथै शिक्षण सामग्री रहेका छन्। यसमा भिडियो, नक्सा, स्कुल विकिपीडिया, अंग्रेजी भाषा क्रियाकलाप, इ पाठ क्रियाकलाप साथै बालबालिकाका लागि इ अध्ययन उपलब्ध छ। यसमा सरकारी स्रोत सामग्री देखी विषयगत सामग्रीमा सामाजिक शिक्षा, समाजशास्त्र, संस्कृत, विज्ञान, वातावरण, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अंग्रेजी लगायतका विषमा अध्ययन सामग्री रहेका छन्। विभिन्न साहित्यिक रचना तथा पुस्तक निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
७. डिक्सनरी डटकम डट एनपी dictionary.com.np
नेपालमा अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थीका लागि अंग्रेजी मुस्किलको विषय हो। अंग्रेजी र नेपाली दुई प्रमुख भाषा कलेजमा प्रयोग हुने भएकाले त्यसका शब्दको प्रयोग राम्रो गर्नु आवश्यक छ। कहिले अंग्रेजीको कुनै शब्दको अर्थ आउँदैन त कहिले नेपाली शब्दलाई अंग्रेजीमा अर्थ्याउन आउँदैन। त्यस अवस्थाको लागि यो डिक्सनरी सहयोगी हुन्छ। अंग्रेजी भाषामा धेरै डिक्सनरीहरु अनलाइनमा भेटिए पनि नेपालीको अंग्रेजीमा अर्थ दिने डिक्सनरी पाउन मुस्किल छ। यस सर्न्दर्भमा यो नेपाली र अंग्रेजी भाषाका शब्दको अर्थ भएको वेबसाइट हो।
८. गुटेनबर्ग डट ओआरजी gutenberg.org
प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग अर्न्तगत सञ्चालन गरिएको यो वेबसाइट विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्णयसकारण छ कि यसले ऐतिहासिक पुस्तकहरु निशुल्क रुपमा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराउँछ। यसमा अंग्रेजी साहित्य, विश्वइतिहास साथै विभिन्न विषयका महत्वपूर्णपुस्तक यसबाट निशुल्क डाउनलोडका लागि पाइन्छ।
९. लाइब्रेरी डट एनयु library.nu
इन्टरनेटमा उपलब्ध अनलाइन लाइब्रेरी मध्ये विद्यार्थीका लागि राम्रो काम दिने पुस्तकालय हो यो। यसमा क्याम्पस देखी विश्वविद्यालय तहमा आवश्यक पर्ने धेरै पुस्तक छन्। मानविकी, व्यवस्थापन, विज्ञान, प्रविधि, कानुन आदी सबै क्षेत्रका पुस्तकहरु यसमा उपलब्ध छ। अनलाइन प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धी विधेयक सोपा र पिपाको चर्चा हुनु भन्दा अगाडि यसले ४० हजार किताब निशुल्क पाउन सकिन्थ्यो। अहिले पनि हजारौं मुल्य भएका पुस्तकका जानकारी र अनलाइन अध्ययन गर्न भने पाइन्छ।
यसबाहेक पनि धेरै वेबसाइट छन् इन्टरनेटमा जो अध्ययनका लागि सहयोगी हुन्छन्। अध्ययनका लागि यदी भाषा समस्या छ, अंग्रेजी बुझिन्न भने धेरै वेबसाइट र वेबटुल छन् जसले भाषाअनुवादको काम गर्छन्। त्यसका लागि सामान्य पनि गुगलको भाषा अनुवादक प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Tagged: विद्यार्थीका लागी उपयोगी ९ वेबसाइट
← यहाँबाट पाऔं फ्रि किताब (Read/Download Free Books Here)
कुन वेबसाइटका यूनिक भिजिटर कति: →